Uncategorized – Myanmar Live
Uncategorized / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / မြန်မာ
January 24, 2020 January 24, 2020 - by arnakorn saengsiritrakun
စည်းကမ်ချိုးဖောက် သည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေ ရေးအေဂျင်စီသုံးခုကို အကျိုး ဆောင်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်း အရေးယူ ခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြား ရေးဦးစီးဌာနက …
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မဟာမြို့တော်ဘန်ကောက်အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်လျက်ရှိကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ လာမည့် ရက်ရှည်ရုံးပိတ်ရက်မှာ မြို့ပြနဲ့ဝေးရာ သဘာဝအလှတရားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကို အလည်အပတ်သွား ချင်ကြမှာပေါ့ ဘန်ကောက်မြို့ဟာ မဟာမြို့တော်ဆိုပေမယ့်လည်း …
လာမည့် ၂-၃ ရက်အတွင်း ဘန်ကောက်တွင် လေထုညစ်ညမ်းပြဿနာဖြင့်ရင်ဆိုင်ရမည် !
January 8, 2020 January 8, 2020 - by iampmy
ဘန်ကောက်အတွင်းနေထိုင်သူများသတိထား ! ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှလေထုနှင့်ရောပါလာမည့် PM 2.5 လေထုညစ်ညမ်းပြဿနာကိုလာမည့် ၂-၃ ဖြင့်ရင်ဆိုင်ရမည်။ အပြင်သွားလျင် နှာခေါင်းစည်းများတပ်ဆင်ကြပါ …
ဗီဇာမရှိသည့်သူများကို နေရပ်ပြန်ပို့ပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်နိုင် !
January 7, 2020 January 7, 2020 - by BB
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လာရောက် လုပ်ကိုင်မည့်သူတိုင်း မှန်ကန်သည့် ဗီဇာအမျိုးအစား တောင်းခံရမယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ “စုချတ် ဖွန်ချိုင်းဝိစစ်ကွန်” ကပြောပါတယ်။ “ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ် …
January 2, 2020 January 2, 2020 - by arnakorn saengsiritrakun
“ဖာဟူရတ်” ဆိုတာ ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့ အထည်လက်လီလက်ကားရောင်းချတဲ့ဈေးကြီး ဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယကုန်သည်များအများအပြားရှိတဲ့ဈေးဖြစ်တာကြောင့်လည်း အိန္ဒိယတန်းလို့လည်းခေါ်ဝေါ်ကြပါသေး တယ်။ “ဖားဟူရတ်” ဈေးကိုတော့ …
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်ကိုပေါ့ပေါ့ဆဆလုပ်ပါက အလုပ်ထုတ်ခံရနိုင်ကိန်းရှိတယ် အရင်ကထက်ပို၍ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်ပါ ထွက်ငွေများပြီး ၀င်ငွေနည်းမယ် မိတ်ဆွေအရင်းများမှ ငွေကိစ္စကြောင့်ရန်သူဖြစ်နိုင်တယ် ငွေလိမ်လည်ခံရကိန်း …
Uncategorized / လူနေမှုပုံစံ
တစ်ပတ်တာ ကံဇာတာ ဟောစာတမ်း ၇-၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
October 7, 2019 October 7, 2019 - by BB
တနင်္ဂနွေးသာ/သမီး ဒီသတင်းပတ်မှာအလုပ်အကိုင်ပုံမှန်ရှိသည် အဆိုးအကောင်းဒွန်တွဲနေမည် သတိတရားကြီးကြီးဖြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ငွေရေးကြေးရေးကျပ်တည်းမည်ဝင်ငွေထွက်ငွေသေချာကိုင်တွယ်ပါ။စုံတွဲများ ချစ်သူဂရုစိုက်ခြင်းခံရမည်။ လူလွတ်များဆက်လက်အထီးကျန်နေမည်။ ယတြာ သာသနိကအဆောက်အအုံးတွင်သစ်ပင်စိုက်ပါ အကျိုးပေးအရောင် …
တစ်ပတ်တာကံဇာတာဟောစာတမ်း ၂၂-၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
September 23, 2019 September 23, 2019 - by BB
တနင်္ဂနွေသား/သမီး နားချိန်မရှိအောင်အလုပ်များနေမည် အလုပ်နှင့်တန်ရာတန်ကြေးရရှိမည် ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ။ ငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေမည် ဒီသတင်းပတ်လုံးသုံးဖို့ရှိမည်။ စုံတွဲများချစ်သူပြဿနာရှာတတ်သည်။ လူလွတ်များအထီးကျန်နေမည်။ ယတြာ သာသနိကအဆောက်အအုံများတွင်သစ်ပင်စိုက်ပါ …